Mudanayaal, Madaxweyne aan Mandate haysan muumuus ka xayuubin Micno ma Samaynayso | Somaliland.Org
Mudanayaal, Madaxweyne aan Mandate haysan muumuus ka xayuubin Micno ma Samaynayso
July 30, 2008	Mudanayaal, Madaxweyne aan Mandate haysan muumuus ka xayuubin Micno ma Samaynayso
Wararkii shalay ka imanayey waxaa ku soo baxay baaq ka soo yeedhay koox ka tirsan Wakiilada Somalailand
8-da Xildhibaan ee isku waafaqay mooshinkan miyaanay dalka hore u joogin, eedaynta ay Madaxweynaha maanta u soo jeedinayaan ma wax cusub baa? Xagay ku maqnaayeen mudadii dheerayd ee Madaxweyanaha Somaliland dastuurka wadanka ku tmanayey.
Dhacdooyin badan oo tiro iyo xisaab beelay oo intooda badan qayrul dastuur ahaa ayaa ka dhacay wadanka. Muranno badan oo mar walba xaallad adag galla ayaa si isdaba joog ah uga dhacaayey wadanka.
Malaa waa ilowdeen dhacdooyinkan ee aan idin xasuusiyo qar a mid ah.
1. Miisaaniyadii Wadanka wuu laalay oo laguma shaqeeyo.
2. Commissionkii doorashooyinka ee khibrada lahaa ayuu eryey.
3. Heshiisyada ay xukuumadu gasho oo aan wakiilada laga ansixin.
4. Xukuumada oo aan qorsheheeda marnaba qeexin cidna kala tashan.
5. Heshiiyada Muranada adag laga gaadho oo marwalba xukuumadu ka baxdo.
6. Hanjabaadiyo xadhig lagula kaco shakhsiyaadka wadanka haybada ku leh.
7. Awood xad dhaaf ah oo lagu isticmaalo shacabka, tusaale ahaan, tiknikadii dhakhtarka gashay, Mudaharaadkii Riiga, Qaraxyadii Hargeisa IWM.
8. Xoolihii oo loo xidhay Nin keliya, Xisaab celisna laga ogolayn.
9. Shidaalkii oo loo xidhay Total, Xisaab celisna laga ogolayn.
10. Kaluunkii oo loo xidhay maraakiib ajnabi, Xisaab celisna laga ogolayn.
11. Dekeda Berbera oo gebi ahaanba baayacmushtarkii uga wareegay Bosaso.
12. Lacagta Togdheer oo marwalba bedelkeeda miisaaniyada lagu hadan laalan.
13. Ciidamada Dalka oo aan wax derajo ah la siinin.
14. Shaqalaha Dawlada oo aan Tiradooda iyo musharkoodu xisaab lahayn.
15. Iyo dhacdooyin fara badan oo aanan halkan ku soo koobi Karin.
Iyada oo aynu dhacdooyinkan oo dhan u soo joognay, nin beenin karaana aanu jirin, hadaba suaashu waxay tahay.
Yaa ka masuul ah in ay xukuumada la xisaabtanto oo dabarto?
Waxaa ka masuul ah in ay xukuumada la xisaabtanto Waajib qarann ka saran yahay.
· Wakiilada Somaliland.
· Xisbiyada mucaaridka ah.
Sidoo kale masuuliyad ayaa ka saran Shacabka Somaliland in ay ka biyo diidaan oo ka dhiidhiyaan falalka ay xukuumadu ku kacdo ee qayrul dastuuriga ah. Sahacabku waxay xaq u leeyihiin in ay ka mudaaharaadaan dhibaatada xukuumadu ku hayso iyaga oo aan nabada gelyada iyo amaanka wax yeelayn.
Xukuumadu waxay si fiican u deristay dhaqanka Shacabka, Wakiilada, iyo Axsaabta mucaaridka, waxay ogaatay in aanay sadexda group midna lahayn awood wax yeeli karta xukuumada isla markaana waxay go’aan ku gaartay in ay xukuumadu maroorsato awoodihii dalka oo dhan.
Hadaba sida aan ku bilaabay qoraalkayga Maanta oo Madaxweynaha mudadii xilka loo dhaariyey ka dhamaatay isla markaana aanu haysanin mandate madaxweynenimo, laakiin aynu qadarinayno heshiiskii ay wada gaadheen Mucaardka iyo Xukuumadu ee ahaa in uu maamulka sii hayo ilaa March 2009, ka dibna doorasho dhacdo mudanayaal miyey haboon tahay in aad soo hanbaabartaan saq dhexe oo wax waliba wakhtigiisii dhamaaday kuna hadaqdaan Aynu madaxweynaha xilka ka xayuubinno waa danbiile qaranne.
Waxaan idinkula talin lahaa xilkiinii kamaydun soo bixine ha is fadeexadynina ee iska aamusnaada inta la dooranyo.
Madaxweyne iyo xukuumad xalaal ah oo shacabku hwshooda u igmado.
Dawlad hoose, xalaal ah oo shacabku hwshooda u igmado.
Mudanayaal Mudada xilka idiinka hadhay dib isugu noqda oo qorshe aad ku shaqaysaan oo dastuuri la kaalaya.
Abdirisaq Haji Hussein